Midowga Yurub oo dhaliilay doorashadi Kenya ee 2017 - BBC News Somali
Midowga Yurub oo dhaliilay doorashadi Kenya ee 2017
Korjoogtada Midowga Yurub ee dusha ka eegaysay doorashadii madaxtinimada ee Kenya ka dhacday sannadkii lasoo dhaafay ayaa waxa ay ku dhaliileen in doorashadaasi ay dalka kala qaybisay oo ay wiiqday dimuqaraadiyaddii.
Korjoogtada ayaa warbixinta ay soo saareen waxa ay ku eedeeyeen hogaamiyeyaasha Kenya inay weerareen hay'ado madax bannaan, sidoo kalana iyaga laf'ahaantooda aanay u suuragelin inay warbixintooda ku soo bandhigaan magaalada Nairobi dantuna ay ku qasabtay inay ka soo saaraan magaalada Brussels.
Kenya ayaa dhankeeda ku eedeysay korjoogtada inay wadaan wax ay ku tilmaantay arrin aan wax ka soo qaad lahayn oo looga gol-leeyahay soo jiidasho siyaasadeed.
Haddaba warbixntan ay soo saareen korjoogtadu dhaawac intee le'eg ayey u gaysan kartaa madaxda haatan ee Kenya? Su'aashaas iyo qaar kale ayaannu waydiinnay Dr Deerow Aadan Cali oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Kenya, waxa uu u warramay Faarax Lamaane oo marka hore weydiiyey nuxurka macluumaadka warbixinta?
Maqal Magalada Hargeysa oo biyaha qasabadaha la wada gaarsiin doono
Magalada Hargeysa oo biyaha qasabadaha la wada gaarsiin doono